Mpanafika môtô sy “compteur”an’ny Jirama 300.000 Ariary no hofan’ny basy ao Toamasina
Tratra niaraka tamin’ny jiolahy raindahiny tao an-tranony, tao Toamasina ny basy vita gasy miisa telo izay heverina ho io olona io ihany no mpanamboatra azy.
Hita niaraka tao koa ny bala PATT miisa fito, Balana Kalachnikov miisa 16, Môto Yamaha AG 200 iray sy Môto Scooter miisa efatra ary Compteur JIRAMA izay vao avy nangalariny. Ireo basy ireo dia haofany amin’ireo jiolahy 300.000 Ariary. Ny zoma 14 jona teo, tamin’ny 11 ora, tao Tanambao, Verrerie Toamasina no nahasamboran’ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’i Mangarano Toamasina azy. Tamin’ny alalan’ny vela-pandrika nampiasain’ny polisy no nahafahana nisambotra azy taoria’ny fisamborana vehivavy iray io zoma io tamin’ny 9 ora. Ity ramatoa ity indray no nofotorana dia nanondro ny toerana misy azy ary notratrarina tany amin’ny toeram-ponenany. Tamin’ny famotorana natao no nahalalana fa anisan’ny jiolahy efa karohina izy sy ny namany hafa noho ny asa fanafihana mitam-piadiana maro tao an-tampon-tanànan’ i Toamasina.